Sardinia: miaina ny divay amin'ny fitsangatsanganana tsiro
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Sardinia: miaina ny divay amin'ny fitsangatsanganana tsiro
Misy antony maro tokony hatao mitsidika an'i Sardinia, nosy iray izay nanjary toeran-kaleha noho ny ezaky ny PR an'ny mpanankarena sy malaza Aga Khan sy ny namany. Androany dia be mponin'ireo olo-malaza manerantany izay mandany ny andro mafana sy ny alina mangatsiaka eny amin'ny lakandranon'izy ireo, ao amin'ny efitranony $ 30,000 isan'andro, ary miantsena any Prada.
Soa ihany, misy toerana ao Sardinia ho antsika sisa izay liana amin'ny fikarohana toerana vaovao ary manandrana divay vaovao; ny nosy dia miantso sommelier sy mpitia divay manana traikefa tsiro tsy manam-paharoa / matsiro.
Tsy toy ny divay any Sisily, ny divay Sardinia dia manana endrika tena ambany. Ny mpikaroka sasany dia mino fa ity dian-tongotra kely eo amin'ny habaky ny tsenan'ny divay eran-tany ity dia vokatry ny tsy fananana andrim-pikarohana toa an'i Istituto Regionale del Vino e Olio, any Sisily, ary tsy fikarakarana akora famokarana divay hanandratana ny divay eo an-toerana amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Toa hadisoana lehibe ity fihetsika ity satria ny marimaritra iraisana dia ny famokarana divay sardiniaana mamokatra divay tena tsara izay mahasarika ireo tia divay na aiza na aiza. Ny tena fisalasalana ataon'ireo orinasa mpamokatra diviziona Sardinia hifaninana amin'ny ampahany lehibe kokoa amin'ny tsena manerantany dia voahodidin'ny zava-miafina. Raha hamaky ny lahatsoratra feno dia mankanesa any wines.travel.